महामारीका बेला भोकालाई खाना खुवाउनेलाई धन्यवाद दिने हो, सजाय दिने होइन: रबि लामिछाने – Online Nepal
April 22, 2020 696
काठमान्डौ ,पत्रकार रबि लामिछानेले अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको रिहाइको माग गरेका छन् ।अभियन्ता शाही हिजो राति पक्राउ परेका थिए ।दैनिक ज्यालादालीमा काम गर्ने मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा विवाद शुरु भएपछि शाही पक्राउ परेका हुन् । पत्रकार रबि लामिछानेले महामारीका बेला भोकालाई खाना खुवाउनेलाई सजाय दिनु नहुने बताएका छन् । सामाजिक संजालमा एक स्टाट्स लेख्दै उनले भनेका छन् -महामारीका बेला भोकालाई खाना खुवाउने लाई धन्यवाद दिने हो, सजाय दिने होइन।
यस्तो छ पत्रकार रबि लामिछानेको स्टाटस -ज्ञानेन्द्र शाहीले के गरेछन् र पक्राउ परेछन भनेर बुझ्दा जानकारी पाए कि उनले मानिसलाई खाना खुवाउने काम गरेछन् । सरकारले राहत बितरण गरेको होला तर त्यो प्रभावकारी भएको छैन। कतिपय स्थानीय प्रतिनिधिहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र छानी छानी राहत बाडिरहेकापनि छन्। यस्तो अवस्थामा भोकै परेका नागरिकलाई खर्चको जोहो गरेर राहत दिनु धर्म हो। लकडाउनको उल्लंघन नहुने गरि स्थानीय प्रशासन सङ समन्वय गरेर,सक्नेले सहयोग गर्ने बेला नै यहि हो।
अन्य अपराध गरेका भए बेग्लै कुरा तर महामारीका बेला भोका लाई खाना खुवाउने लाई धन्यवाद दिने हो, सजाय दिने होइन। बिकृतिको चाङमा उभिएको सरकारका बिरोधमा ज्ञानेन्द्रले अलि कडा बोले होलान्, तर भ्रस्टाचार गर्नेलाई समाउने कि भ्रस्टाचार विरुद्ध बोल्नेलाई समाउने? भोका जनतालाई खाना खुवाएकोमा धन्यवाद दिदै अब प्रशासनले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रिहा गरोस्। ज्ञानेन्द्र जी ले पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर राहत कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ।
Prevबुधबार जन्मनेहरु कति भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ बुधबार जन्मनेहरुको स्वभाव र भविष्य !
Nextउदयपुरमा अर्को पनि कोरोना संक्रमित फेला परे, संक्रमितलाई विराटनगर ल्याउने तयारी गरिदैं
आफै क्यान्सर पीडित भएर पनि दिनरात विरामीकाे सेवा खटिएकि डा. खरेलको निधन, निधन पुर्व यसो भनेर उनि संसार छोडिन् !